Nhau - Inoyerera pendant yekristaro mwenje-Frozen Mvura
Inoyerera pendant sekristaro mwenje -Mvura Yakaomeswa
Algorithm chiratidzo chemasvomhu nhetembo dzezvakasikwa. dhizaini yekuvhenekesa naToan nguyen, iboka remagirobhu anoita kunge achiyangarara muchadenga seboka reshiri, kana mvura yechando inonaya. chirongwa ichi chinopa nziyo dzisingaperi umo marambi anotenderedzwa anogona kumiswa panzvimbo dzakasiyana kubva pasiringi anchor ye tubular mesh - netiweki yesimbi iyi inogadzira yayo yega mimvuri uye zvinoonekwa.
kuvhenekera kunoratidzika sedenderedzwa remaglobes anoyangarara muchadenga seboka reshiri, kana mvura yechando
iyo chinangwa chaisave chekugadzira chakanyatso tsanangurwa uye 'chakapedzwa' chigadzirwa, asi chishandiso chinobvumidza chero mutengi kugadzira yake yekuvhenesa system, zvine chekuita nenzvimbo yekuvaka, nzvimbo yekuvhenekera uye nemhando inodiwa ye 'graphic pateni, anodaro dhizaina Toan Nguyen.
iyo 'algorithm' inobvumidza iwo kumisa maglobes pakukwirira kwakasiyana kuti vagadzire ine simba rekugadzira mwenje
maglobhu akagadzirwa negirazi inopepereswa uye anoratidzira patani yakatsemuka pamusoro pechiso chavo
kumwe kurongeka kwe 'algorithm
Pasi rega rega rakashongedzwa ne2W LED
Pamwe iwe unofunga kuti mwenje uyu unodhura zvakanyanya uye wakaomarara. Muchokwadi, iwe unogona kuwana izvo mumutengo wakaderera kwazvo. Nekuti munhu wese anokwanisa kuwana zvikamu zvezvikamu izvi zviri nyore kwazvo.
Nekudaro, iyo yakakosha poindi yemwenje uyu kwete iyo yekristaro chikamu kana maLED, Icho chiri nezve iyo Algorithm. Maitiro ekuvaisa munzvimbo isina kukwana.
Chokwadi, kune mamwe magirazi magirazi ekurembera, uye yakatungamira CCT uye watts inogona kuve tsika yakagadzirwa.
Semugadziri wechiedza wechiedza, gara uchiita zvinhu zvatinogona.